Strikingly: Bubata LinkedIn n'ime Ebe Mara Mma, Ekwentị Kachasị Mma Site | Martech Zone
Enwere oge mgbe ị na-achọghị imefu ọtụtụ puku dollar na saịtị ọhụrụ - naanị ị ga-achọ onye na-etinye ebe maka pọtụfoliyo ịntanetị, akwụkwọ ngwaahịa dị mfe ma ọ bụ naanị iji gosipụta mbido ntanetị gị. Na-enye ihe ngwọta akwadoro ebe ị nwere ike ịmepụta 3 kachasị mma, saịtị mara mma n'okpuru $ 100 kwa afọ.
N'ụzọ dị ịtụnanya bụ ọrụ dị n'ịntanetị nke na - eme ka ọ dịrị gị mfe iji wuo ọmarịcha mkpokọta weebụ kachasị na nkeji. Maka azụmahịa gị, ọrụ gị, ma ọ bụ akara nke onwe gị, ebe nrụọrụ weebụ mara mma dị mkpa maka ọnụnọ gị n'ịntanetị na izi ezi na Mobile Age. Na-enweghị koodu ma ọ bụ imewe ma ọlị, ị nwere ike ịtọlite ​​ebe nrụọrụ weebụ ọkachamara nke na-adị mma na ekwentị gị, mbadamba, na kọmputa na nkeji!
Martech Zone Ndị na-agụ: Chekwaa 10% na PROMOCODE: LAUNCH10OFF ma nweta atụmatụ PROkingly PRO maka $ 18 kwa ọnwa!
Saịtị niile jiri Strikingly dị mfe nchịkọta akụkọ ebe ị nwere ike ịchọgharị ha niile ndebiri:
Otu ihe ngosi puru iche bu ikike iwulite saiti nke gi site na ijiko na LinkedIn. Saịtị na-ebubata ozi gị niile:
Can nwere ike iji onye nchịkọta akụkọ ha dị mfe gbanwee ihe ọ bụla (usoro a na-akwụghị ụgwọ bụ nke pere mpe ma e jiri ya tụnyere ụdị akwụ ụgwọ):
N’ime obere oge, ị nwere webusaiti nkeonwe bara uru ịkekọrịta yana ekwentị mkpanaaka!
Ngosi: Anyị bụ ndị mmekọ N'ụzọ dị ịtụnanya ma jiri njikọ njikọta anyị na post a.
Tags: CMSusoro njikwa ọdịnayaomume saịtịnjikọ njikọnjikọ njikọmobile anabatasaịtị mkpanakaotu peeji peejiPọtụfoliyo saịtịngwaahịa saịtịanabataanabata web saịtịpụtara ìhè